အသုံးပြုသူ:Zawthet/Archive5- ဝီကီပီးဒီးယား
၁ Thank you for participating in the UNESCO Challenge!
၂ COH Challenge
၄ ESEAP Conference
၆ WAM Organizers Update
၇ What's Next (WAM)!
၈ WAM Postcard collection
၉ Invitation to Organize Wiki Loves Love 2019
၁၀ Community Insights Survey
၁၂ Invitation from WAM 2019
၁၃ Wikipedia Asian Month 2019
၁၄ Extension of Wikipedia Asian Month contest
၁၅ What's Next (WAM)!
၁၆ WAM 2019 Postcard
၁၇ WAM 2019 Postcard
၁၈ WAM 2019 Postcard: All postcards are postponed due to the postal system shut down
Thank you for participating in the UNESCO Challenge!ပြင်ဆင်
John Andersson (WMSE) (ဆွေးနွေး) ၀၈:၂၅၊ ၂ ဇွန် ၂၀၁၇ (UTC)
Best, Eric Luth (WMSE) (ဆွေးနွေး) ၁၅:၃၅၊ ၃၀ ဇွန် ၂၀၁၇ (UTC)
I come from other wikis. I was wondering if you can translate "Village in China", "Commune in Morocco", and "village in Indonesia". It is for updating Wikidata. Thanks in advance. Artix Kreiger (ဆွေးနွေး) ၂၀:၁၅၊ ၄ မတ် ၂၀၁၈ (UTC)
Do you just want to translate those phrases or do you want me to translate the articles? Zawthet (ဆွေးနွေး) ၁၆:၅၁၊ ၅ မတ် ၂၀၁၈ (UTC)
Oh sorry I meant just the phrases. As in "X isavillage in China", but without "X is a". Just the phrases, preferably lower case. Thank you. Artix Kreiger (ဆွေးနွေး) ၀၂:၀၄၊ ၇ မတ် ၂၀၁၈ (UTC)
"Village in China" = တရုတ်နိုင်ငံရှိ ကျေးရွာ ၊ "Commune in Morocco" = "မော်ရိုကိုနိုင်ငံရှိ ကွန်မြူးန်" ၊ "Village in Indonesia" = "အင်ဒိုနီးရှားရှိ ကျေးရွာ" . There is no direct translation for commune. So, I have just transliterate it. Zawthet (ဆွေးနွေး) ၂၁:၅၂၊ ၁၃ မတ် ၂၀၁၈ (UTC)
ah thanks. Would "မော်ရိုကိုလူထု" be ok? Artix Kreiger (ဆွေးနွေး) ၁၄:၁၇၊ ၁၅ မတ် ၂၀၁၈ (UTC)
I think Commune in Morocco might be မော်ရိုကိုရှိ ခရိုင်ငယ် since commune means the smallest French territorial division for administrative purposes. Thanks. Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၁၄:၂၉၊ ၁၅ မတ် ၂၀၁၈ (UTC)
Wirjadisastra (ဆွေးနွေး) ၀၂:၄၁၊ ၁၄ မတ် ၂၀၁၈ (UTC)
အစ်ကိုရေ အရှေ့ ကာလီမန်တန်ပြည်နယ် လို့ ရေးတာအမှန်လား မသိဘူး။ အရှေ့နဲ့ ကာလီမန်တန်ကြားထဲမှာ စပေ့ခြားစရာ မလိုဘူးလို့ ထင်တယ်။ ဥပမာ အရေးတွင်ကျယ်နေတဲ့ တောင်ကိုရီးယား၊ မြောက်ကိုရီးယားတို့လိုပေါ့။ ဘယ်လိုရေးတာ အမှန်လဲတော့ မသိဘူး။ ခင်မောင်မောင်လွင် (ဆွေးနွေး) ၀၈:၅၄၊ ၁၇ ဇွန် ၂၀၁၈ (UTC)
အဲဒီလို ရေးတာပိုအဆင်ပြေမယ် ထင်တယ်။ ပြင်လိုက်မယ်။ ကျေးဇူးပါ။ Zawthet (ဆွေးနွေး) ၁၈:၃၄၊ ၁၇ ဇွန် ၂၀၁၈ (UTC)
WAM Organizers Updateပြင်ဆင်
What's Next (WAM)!ပြင်ဆင်
Sailesh Patnaik using MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၀၄:၅၉၊ ၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈ (UTC)
WAM Postcard collectionပြင်ဆင်
Note: This form is only accessed by WAM international team. All personal data will be destroyed immediately after postcards are sent. If you have problems accessing the google form, you can use Email This User to send your address to my Email. Thanks :) --Saileshpat using MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၂၁:၁၅၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈ (UTC)
Invitation to Organize Wiki Loves Love 2019ပြင်ဆင်
--MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၁၂:၃၃၊ ၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉ (UTC)
Hi Zawthet/Archive 5,
အကို ဒိုက်ဦးမြို့အကြောင်းအ‌ေထာက်အထားအပြည့်အစံုနဲ့တင်ချင်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ။ Naylynnaung8380 (ဆွေးနွေး) ၀၆:၄၉၊ ၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
Invitation from WAM 2019ပြင်ဆင်
Sailesh Patnaik using MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၁၇:၀၃၊ ၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
Wikipedia Asian Month 2019ပြင်ဆင်
--MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၁၁:၄၆၊ ၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
Extension of Wikipedia Asian Month contestပြင်ဆင်
--MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၁၄:၁၂၊ ၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
--MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၁၇:၃၀၊ ၁၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
WAM 2019 Postcardပြင်ဆင်
Wikipedia Asian Month International Team --MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၀၈:၁၆၊ ၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ (UTC)
MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၂၀:၅၈၊ ၂၀ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ (UTC)
WAM 2019 Postcard: All postcards are postponed due to the postal system shut downပြင်ဆင်
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ:Zawthet/Archive_5&oldid=508062" မှ ရယူရန်
၂၇ မတ် ၂၀၂၀၊ ၀၅:၄၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ မတ် ၂၀၂၀၊ ၀၅:၄၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။